डलरको मूल्य १२० रुपैयाँ नजिक, एक दिनमै ५३ पैसा बढ्यो – Aarthik Samachar
डलरको मूल्य १२० रुपैयाँ नजिक, एक दिनमै ५३ पैसा बढ्यो
(FILES) This file photo taken on January 30, 2011 shows US currency in Manassas, Virginia. The dollar rose marginally against the euro, yen and British pound on August 8, 2016 in largely tranquil currency markets. The movements followed last week's encouraging employment numbers from the US Labor Department, likely to feed speculation ofaUS interest rate hike this year. / AFP PHOTO / KAREN BLEIERKAREN BLEIER/AFP/Getty Images
लगातार उकालो लागेको अमेरिकी डलरको मूल्य बुधबार १ सय २० रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । बुधबार एकैदिन ५३ पैसाले बढ्दै अमेरिकी डलर १ को १ सय १९ रुपैयाँ ३३ पैसामा कारोबार भईरहेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदर र पछिल्लो समय अमेरिकी मुद्राको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दै गएपछि त्यसको असर नेपाली मुद्रामा पर्न गएको हो । डलरको मूल्य बढ्दा नेपाल भित्र्ने रेमिटान्समा उच्च वृद्धि भएपनि समग्रमा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ । अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च रुपमा बढ्दै जाँदा आयातित बस्तु महङ्गो हुनुका साथै नेपाली उद्योगबाट उत्पादित बस्तुका मूल्य समेत बढ्न जानेछ । चाडपर्वको समयमा डलरको मूल्य उच्च हुँदा बजारमा महङ्गी बढ्न गई नेपालीको दशैं तिहार महङगो हुने सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली कामदारले पठाउने रेमिटान्स र पर्यटन उद्योगमा केही फाइदा पुगेपनि आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका कारण मूल्यमा बढी चाप पर्ने छ । विशेषगरी दशैंको समयमा २० प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । दैनिकरुपमा बढ्दो डलर मूल्यका कारण देशको व्यापार घाटा भयावह हुनुका साथै भुक्तान सन्तुलन समेत विग्रने खतरा बढेको छ । अहिले नेपालको वैदेशिक ऋण ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । जसले गर्दा वैदेशिक ऋण भार महङ्गो पर्न गई देशको बजेट सन्तुलनमै असर पर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । डलरको मूल्य बढ्दा नेपाल भित्र्ने रेमिटान्समा सुधार आएपनि त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने छ । विशेषगरी मूल्यमा चाप पर्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।